Maxay yihiin heerarka SEO ee horumarinta websaydhka?
Si aad u abuurto bogga si aad u fiican loo tixgeliyo waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso xeeladinta raadinta raadinta ee naqshadeynta webka iyo horumarinta bilowga. Si kastaba ha ahaatee, had iyo jeer ma aha kiiska. Waa inaad ka warqabtaa xaqiiqda ah in xitaa haddii goobta aad si fiican u codsatay oo uu leeyahay naqshad aad u fiican, laguma qiimayn doono macaamiishaada iman kara iyo sidoo kale matoorada goobaha aan SEO. Xaaladaha qaarkood, oo aan laheyn websaydh waa ka fiican yahay naqshadeynta naqshad websaydka oo ka dhigaysa dadka soo booqda khibrad taban oo isbeddelkooda ku saabsan ururkaaga - preloved navy wedding hats. Naqshadeynta raadinta mashiinka raadinta ayaa ah geeddi-socod lagu sameeynayo website ah oo aragti ahaan rafcaan iyo isla mar ahaantaana si sahlan u socdaalka ah
. Xaq ma aha in aad ka fekerto qaab-dhismeed websaydh ku hayo maskaxda, sawirrada, iyo hab-dhiska. Waa inaad sidoo kale tixgelisaa sida raadiyayaashu raadinayaan ay u faahfaahin doonaan iyo sida ay isticmaalayaashu u socdaan. Qalabka dhismahaagu wuxuu u baahan yahay inuu ahaado mid saaxiibtinimo leh. Waxay taabataa dhinac kasta oo ka mid ah code HTML si isku xira iyo in ka badan.
Qodobkani, waxaanu si dhow u eegaynaa waxa loo baahan yahay si loo dhiso hal-abuurka raadinta raadinta shabakadda internetka.
Heerarka sare ee SEO-ga
Fikradaha soo socda ee SEO ayaa faa'iido u noqon doona horumarinta horay iyo gadaal dambe ee qaybaha geedi socodka website-ka.
CSS / Tabarrada
Waxaa lagugula talinayaa inaad hirgeliso CSS halkii aad ka sameyn laheyd qaabka kiniinka si aad u heshid boggag la taaban karo. Waxay u ogolaaneysaa in ay hagaajiso waxyaabaha ku jira bogga.
Hirgelinta waxyaabaha asaasiga ah
Waa macquul in la xaddido isticmaalka waxyaalihii loo yaqaan 'tags' iyo 'H'. Waa inaadan isticmaalin bogagga HTML ee noocaan ah ee ku yaal meelaha lagu dul maro, cinwaanka bogagga oo dhan, ama noocyada kale ee soo noqnoqda ee ku soo baxaya tirada bogagga bogagga. Beddel ahaan, waxaad isticmaali kartaa div caadi ah. Ku dhaji buqarradaas buug yar oo loogu talagalay bog kasta.
Waxaad hirgelin kartaa sawirada asalka ah ee CSS ee dhammaan shabakadaha qaabdhismeedka. Si kastaba ha noqotee, waxyaabaha ku jira maadada ee ku jira gudaha qoraalka, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho tagsiyada muuqaalka caadiga ah. Tusaale ahaan, for logos, waxa fiican inaad isticmaasho tagska image halkii laga beddelayo qoraalka.
Websiteyasha internetka waxay gacan ka geysan karaan horumarinta moobiilka raadinta mareegta bogagga fulinta qoraalada mashiinka mashiinka lagu akhriyo. Waa macquul in la isticmaalo bedelka hore sida @ font-face or images si ay u muujiyaan qoraallada. Intii aad isticmaali lahayd CSS, hirgelinta sawirada muuqaalka leh oo leh naqshad aad u wanaagsan oo soo celineysa muuqaalka muuqaalka.